Electric Vehicle – AutoMyanmar
Posts tagged with: Electric Vehicle
Date: March 29, 2018 0
Jaguar ရဲ့ I-Pace နဲ့ မိမိရဲ့ကားမောင်းကျွမ်းကျင်မှုအရည်အချင်းကိုစမ်းသပ်ခဲ့တဲ့ ‘Baby Driver’ Star တစ်ဉီး
‘Baby Driver’ ဇာတ်ကားမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ Hollywood သရုပ်ဆောင်မင်းသားတစ်ဉီးဖြစ်သူ Ansel Elgort ဆိုသူကတော့ Jaguar ရဲ့ SUV အမျိုးအစား Electric Vehicle ဖြစ်တဲ့ I-Pace ကို တက်မောင်းပြီး သူ့ရဲ့ကားမောင်းကျွမ်းကျင်မှုကို စမ်းသပ်လိုက်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ မြေညီအတားအဆီးကင်းမဲ့နေတဲ့ လမ်းမှာတောင်မဟုတ်ပဲ “Smart Cone Challenge” မှာ ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်ကို စမ်းသပ်ခဲ့တာပါ။ စမ်းသပ်မောင်းနှင်ခဲ့တဲ့နေရာကတော့ Brooklyn (Cap ရဲ့မွေးရပ်မြေလေး ?) မှာရှိတဲ့ Seret Studios မှာပါ။ Ansel Elgort ရဲ့ ကားမောင်းစကေးတွေကိုတော့ အောက်ကဗီဒီယိုကနေ ကြည့်ရှု့နိုင်ပါတယ်။ ﻿ Ansel Elgort ရဲ့ ကားမောင်းကျွမ်းကျင်မှု စကေးတွေကတော့ “Baby Driver” ရုပ်ရှင်ပြန်ကြည့်နေရသလိုပဲနော်.. ဟုတ်တယ်မလား ? I-Pace ကိုလည်းမောင်းပြီးရော Ansel […]
Auto News , New Models
Electric Vehicle, Jaguar
Date: February 6, 2018 0
၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်းမှာလျှပ်စစ်ယာဉ် ပေါင်း ၁.၅၂ မီလီယမ်ကျော်အထိရောင်းချနိုင်ခဲ့တဲ့ Toyota!
Toyota အနေနဲ့ ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်းမှာ လျှပ်စစ်ယာဉ်ပေါင်း ၁.၅၂ မီလီယမ်ကျော်အထိရောင်းချနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတော့ ဖေဖော်ဝါရီ ၂ ရက်နေ့က ကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၆ က ရောင်းအားထက် ၈ ရာခိုင်နှုန်းအထိမြင့်တက်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရောင်းအားရလဒ်ကိုတော့ Toyota အနေနဲ့ ၂၀၂၀ မှရရှိလိမ့်မယ်လို့ ခန့်မှန်းထားတာဖြစ်ပြီး ၂၀၁၇ ကတည်းရရှိနေတာကြောင့် Toyota အတွက်ကတော့ အလားအလာကောင်းဖြစ်သလို Toyota ရဲ့ Environmental Challenge 2050 ထဲက တစ်ခုဖြစ်တဲ့ “ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ဓာတ်ငွေ့ ၉၀ရာခိုင်နှုန်းအထိလျှော့ချမှု” ကိုလည်းအထောက်အကူပြုစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ Toyota ဟာလျှပ်စစ်ကားတွေကိုတော့ ၁၉၉၇ ခုနှစ်ကတည်းကစတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့တာပါ။ ၁၉၉၇ ခုနှစ်တုန်းကဆိုရင် Toyota ရဲ့လျှပ်စစ်ကားတွေဟာဆိုရင် တစ်ကမ္ဘာပေါင်းမှာ အစီး ၅၀၀ ပဲရောင်းထွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အစီး ၅၀၀ ရောင်းအားကနေ နှစ် ၂၀ အကြာ ၂၀၁၇ […]
Electric Vehicle, Toyota, Year of sales
Date: January 22, 2018 0
ဂျပန်ရဲ့ လျှပ်စစ်ဘက်စ်ကားတွေမှာ Leaf ရဲ့ နည်းပညာပံ့ပိုးမယ့် Nissan!
Leaf EV အတွက်ဖန်တီးထားတဲ့ Nissan ရဲ့ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းလျှပ်စစ်နည်းပညာကိုတော့ ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းမှာပဲ လျှပ်စစ်ဘက်စ်ကားတွေမှာ စမ်းသပ်အသုံးပြုတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ Detroit Auto Show မှာ “2018 FIPA Green Car of the Year” ဆုကို ရရှိခဲ့တာကိုကြည့်ရင် Nissan Leaf ဟာလျှပ်စစ်နည်းပညာအပိုင်းမှာပေါ့သေးသေး မဟုတ်တာကိုသိရှိနိုင်မှာပါ။ လျှပ်စစ်ဘက်စ်တွေ စမ်းသပ်အသုံးပြုမယ့်စီမံကိန်းကို Kumamoto University ကဉီးဆောင်တာဖြစ်ပြီး နည်းပညာအပိုင်းကို Nissan ကကူညီပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ လျှပ်စစ်ဘက်စ်တွေကိုတော့ “Yoka ECO Bus” လို့အမည်ပေးထားပြီး လျှပ်စစ်မော်တာသုံးလုံးနဲ့ Inventer တစ်လုံးပါဝင်မှာပါ။ မော်တာနဲ့ Inventer တွေကိုတော့ Nissan leaf ရဲ့နည်းပညာနဲ့ ဖန်တီးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Yoka ECO Bus တွေကိုတော့ ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းမှာ ဂျပန်ရဲ့အနောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ Kumamoto […]
Electric Vehicle, Nissan
Electric Vehicle တွေအတွက် “ePowertrain” Platform ကိုဖန်တီးလိုက်တဲ့ Panasonic!
Panasonic Corporation အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ ဇန်နဝါရီလ ၉ ရက်နေ့က las vegas မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ CES 2018 မှာ Electric Vehicle တွေအတွက် “ePowertrain” platform ကိုဖန်တီးလိုက်ပြီဆိုတဲ့အကြောင်း ဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Panasonic ရဲ့ ePowertrain platform ကတော့ Electric Vehilce(EV) တွေမှာအသုံးပြုနိုင်တဲ့ systematized application ပါ။ လျှပ်စစ်ကားတွေအတွက်သာ မဟုတ်ပဲ Mircro EVs လေးတွေဖြစ်တဲ့ လျှပ်စစ်ဆိုင်ကယ်၊ လျှပ်စစ်စက်ဘီးတွေ အတွက်ပါ ဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ The platform Panasonic has developed for EV bikes and micro EVs is an energy-efficient, safe powertrain that features integrated compactness, […]
Electric Vehicle, Panasonic